VACC5000 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်ကို တစ်နာရီတွင် ၅၀၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်နံပါတ် ၂၅၀၉၆၉ တရားဝင်လက်မှတ်ရရှိထားပါတယ်။
မော်ဒယ်- VACC 5000
အမြိုးအစားခှဲခွားထားသောနရော: ရေစစ်ထုတ်သောလိုင်း , RO-VACC-mm , Hot
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: VACC5000
VACC5000 Purified water filtration system is imported, distributed and installed by Viet An General Trading Joint Stock Company. The product is suitable for various water sources.
VACC5000 ရေသန့်စစ်ထုတ် ကိရိယာကို Viet An အထွေထွေ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီမှ တင်သွင်းဖြန့်ချီပေးပါတယ်။ ဒီစက်က ရေအရင်းအမြစ်အမျိုးမျိုးအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။
The system uses Composite tank which is cost-saving, easy to install and durable. The Composite tank is also suitable for various environment, including the natural environment, acid environment, and alkaline environment. Besides, with its eye-catching and modern design, it is easy and convenient to operate the system.
ဒီစနစ်မှာ အကုန်အကျ သက်သာပြီး တပ်ဆင်ရလွယ်ကူကာ ကြာရှည်ခံတဲ့ စုပေါင်း တိုင်ကီကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ ဒီတိုင်ကီက သဘာဝ၊အက်ဆစ်၊အယ်လ်ကာလိုင်း စသဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးမျိုးအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လှပပြီး ခေတ်မီတဲ့ ဒီဇိုင်းကြောင့် လည်ပတ်ဖို့ လွယ်ကူပြီး အဆင်ပြေပါတယ်။
The product can be used for various purposes, including water filtration in the apartments, resorts, restaurant chain, schools, hospitals, purified bottled water factories or in the purified cube ice plants.
With the application of RO nanoe water filtration technology - the most advanced technology os the United States currently, the system satisfies ISO 9001:2015- the international standard foraquality management system.
ဒီပစ္စည်းကို တိုက်ခန်း၊ အပန်းဖြေစခန်း၊ စားသောက်ဆိုင်၊ ကျောင်း၊ ဆေးရုံ၊ ရေသန့်ဘူးစက်ရုံတွေနဲ့ ရေခဲထုတ် စက်ရုံတွေမှာ အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။ US ရဲ့ RO Nanoe ရေစစ်ထုတ်တဲ့ နည်းပညာကြောင့် ISO 9001:2015 စံချိန်စံညွှန်းနဲ့ ကိုက်ညီပါတယ်။
Are you seeking for investing inapurified bottled water factory? DO you needapurified water source that meets the quality standards? If you want to improve the technology and water quality, this VACC5000 5000LPH Bottled water filtration line will beaperfect choice for you..
ရေသန့်ဘူး စက်ရုံမှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံဖို့ ရှာဖွေနေပါသလား။ စံချိန်စံညွှန်းနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ရေအရင်းအမြစ် လိုအပ်ပါသလား။ ရေရဲ့ အရည်အသွေးနဲ့ နည်းပညာတွေ တိုးတက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ VACC5000 5000LPH က သင့်အတွက် အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်မှု ဖြစ်ပါလ်ိမ့်မယ်။
VACC5000 5000LPH Purified water filtration system - the best water filtration solution
VACC5000 5000LPH ရေသန့်စစ်ထုတ်ကိရိယာ- အကောင်းဆုံး ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်း
With its outstanding ability of turning the unsecured water into pure water, VACC5000 model is increasingly trusted and chosen byavariety of manufacturers.
There areanumber of treating and filtering the water, including
အရည်အသွေးမမီတဲ့ ရေတွေကို ရေသန့်သို့ ပြောင်းပေးနိုင်တာကြောင့် ဒီစက်ကို စက်ရုံအများစုက ရွေးချယ်ကြပါတယ်။
Detoxification, decontamination and deodorizing filtration
The treatment system removes organic compounds, strange odors, and colors from the water. At the same time, it removes the heavy metal such as Fe, Mn, As and the contaminants from the groundwater, well water.
အဆိပ်အတောက်၊ ရောဂါပိုးမွှား၊ အနံ့အသက် စစ်ထုတ်ခြင်း
ဒီစနစ်က ဓာတုပစ္စည်းတွေ၊ အနံ့ဆိုးတွေ၊ အရောင်တွေကို ဖယ်ထုတ်ပေးပါတယ်။ ထို့အပြင် Fe, Mn, As နဲ့ မြေအောက်ရေ၊ တွင်းရေတွေထဲက ပျော်ဝင်နေသော အရာဝတ္ထုများကိုလည်း ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။
The industrial RO membrane will help to remove Ca, Mg ions which cause hard water, meeting the Health Ministry's standards on clean water and domestic water.
စက်ရုံသုံး RO အလွှာပါးက ရေကိုမာစေတဲ့ Ca, Fe တွေကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဋ္ဌာနရဲ့ စံနှုန်းတွေနဲ့ ကိုက်ညီစေပါတယ်။
The water is pumped into the filter cartridge of the RO membrane system where Fe, As, Mn will be removed according to the oxidation mechanism of KMnO4 on manganese sand surface. After that, the water will be transferred to the raw filter tank which includes activated carbon for detoxification, decontamination and deodorizing. Finally ,the water is pumped into the hard water treatment tank through the duct. At this tanks, the plastic particles carrying positive Ion exchange resin will exchange with Ca2 +, Mg2 +, etc. in the water.
ရေကို Fe, As, Mn တို့ကို ဖယ်ရှားပေးမယ့် RO အလွှာပါးစနစ်ရဲ့ စစ်ထုတ်ကိရိယာတောင့်ဆီသို့ စုပ်တင်ပါမယ်။ အဲ့ဒီ့နောက်မှာ ရေကို ပိုးမွှား အနံ့အသက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးတဲ့ ကာဗွန်ပါတဲ့ ရေအစိမ်းစစ်ထုတ်ကိရိယာဆီကို ရွှေ့ပြောင်းပေးရပါမယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ရေကို ပြွန်ကိုဖြတ်ပြီး ရေမာတွေကို ပြုပြင်ပေးတဲ့ တိုင်ကီဆီသို့ စုပ်တင်ပါမယ်။ ဒီတိုင်ကီတွေမှာ ကောင်းသော အိုင်ယွန်အစေးပါတဲ့ ပလပ်စတစ်အမှုန်တွေက ရေထဲမှာ Ca2+, Mg2+ စသဖြင့် ပြောင်းပေးပါလိမ့်မယ်။
Ca2 +, Mg2 Ion exchange resin will be kept on the surface of the exchanged resin. The Ion exchange resin will be removed in this process to make the water softer and better for our health.
Ca2+, Mg2 အို်င်ယွန်ပြောင်းလဲပေးတဲ့ အစေးကို မျက်နှာပြင်မှာ သိမ်းထားပါမယ်။ ဒီအစေးကို ရေကိုပျော့စေပြီး ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းရန် ယခုအဆင့်မှာ ဖယ်ထုတ်လိုက်မှာ ဖြစ်တယ်။
After all pollutants in the water are completely removed, the water will flow into the fine filter cup. With the filter membrane having dimension of5µm, this cup will help to remove all suspended solids, exchanging resin particles remained from the previous filter tank to ensureapurified water source,
ရေထဲမှာ ရှိတဲ့ အရာတွေကို ဖယ်ထုတ်ပြီးနောက် ရေက ကောင်းမွန်သော ရေစစ်ခွက်ထဲသို့ စီးဆင်းပါမယ်။5µm အတိုင်းအတာရှိတဲ့ ရေစစ်ထုတ်အလွှာပါးကြောင့် ဒီခွက်က ကျန်နေတဲ့ အစိုင်အခဲတွေကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အရင်တိုင်ကီမှာ ကျန်နေတဲ့ အမှုန်တွေကို အစေးသို့ ပြောင်းပေးပါတယ်။
Qualified pure water meeting QCVN 6-1:2010/BYT standards
QCVN 6-1:2010/BYT ရေသန့်စံချိန်စံနှုန်းနဲ့ အရည်အသွေးပြည့်မီပါတယ်။
Through the pre-filtration process of industrial RO water filtration systems, the water will be pushed through the high pressure pump. The pump is now responsible for pushing water toacertain pressure to pass the RO membrane. As the RO membrane size is extremely tiny, at 0.0001µm only,astrong enough pressure is required to push the water molecules through the membrane holes and trap the dirt on the membrane surface, creating the purest water source. Periodically, the valves will wash the material completely automatically. This automatic process is carried out regularly, increasing the filtration efficiency, as well as the shelf life of the filter material. Afteralong time of operation, it is recommended to replace the new filter material forasmooth, stable operation.
စက်ရုံသုံး RO ရေစစ်ထုတ်စနစ်ရဲ့ အကြိုရေစစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်ကို ဖြတ်ပြီး ရေကို ဖိအားပြင်း ရေစုပ်စက်ထဲသို့ စုပ်တင်ပါမယ်။ ရေစုပ်စက်က RO အလွှာပါးကို ဖြတ်ရန် ရေကို စုပ်တင်ပေးပါတယ်။ RO အလွှာပါးရဲ့ အရွယ်အစားက 0.0001µm သာရှိပြီး အလွန်သေးငယ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ရေမော်လီကျူးတွေကို အလွှာပါးအပေါက်တွေကို ဖြတ်ပြီး အလွှာပါးမျက်နှာပြင်မှာရှိတဲ့ အညစ်အကြေးတွေကို ဖယ်ရှားပေးဖို့ လုံလောက်တဲ့ အားကောင်းသော ဖိအားလိုအပ်ပါတယ်။ အဆို့တွေက သတ္တုတွေကို အော်တိုဆေးကြောပေးပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကို စနစ်တကျမှန်မှန် ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုရင် သက်တမ်းကြာရှည်ခံပါတယ်။ အချိန်ကြာကြာ အသုံးပြုပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ ပိုပြီးချောမွေ့တဲ့ လုပ်ဆောင်မှုအတွက် ရေစစ်တဲ့ ပစ္စည်းအသစ်ကို အစားထိုးပေးပါ။
In the industrial purified water filtration system 5000/h, the softening column will haveasalt tank to reconstitute. After the cation exchange, the resin particles will gradually lose their effect. Thus, it takes time for these particles to reconstitute again. Afteraperiod of use, these cationic particles will gradually lose their effect and must be replaced.
တစ်နာရီမှာ ၅၀၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတာကြောင့် ရေပျော့စေတဲ့ ကော်လံမှာ ပြန်ပေါင်းဖို့အတွက် ဆားတိုင်ကီ ရှိပါလိမ့်မယ်။ ကဒ်ရှင်ပြောင်းပြီးသွားတဲ့အခါ အမှုန်တွေက သူတို့ရဲ့ အစွမ်းတွေ ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ပြန်ပေါင်းပေးဖို့ အချိန်ယူရပါတယ်။ အချိန်တစ်ခုကြာတဲ့အခါ အဲ့ဒီကဒ်ရှင်အမှုန်တွေက အစွမ်းပျောက်သွားပြီး နေရာမှာ ပြန်ထားပေးရပါမယ်။
For RO purified water filtration system, the membrane will be washed periodically to remove the dirt on the membrane surface, and restore the membrane's filtration ability.
RO ရေသန့်စနစ် စစ်ထုတ်စနစ်အတွက် အလွှာမျက်နှာပြင်ပေါ်က အညစ်အကြေးတွေကို ဆေးကြောပေးဖို့နဲ့ အလွှာရဲ့ စစ်ထုတ်အရည်အသွေးကို ထိန်းသိမ်းဖို့ အလွှာပါးကို ဆေးကြောပေးရပါမယ်။
All the processes are closed so to can prevent all dirt, bacteria and pollutants from the outside environment from entering the pure water.
လုပ်ဆောင်မှုတွေအားလုံးက ကောင်းမွန်တာကြောင့် ရေသန့်ထဲကို အညစ်အကြေး၊ ဘက်တီးရီးယား စတာတွေ ဝင်ရောက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
At any place in the house, water will be flowed through the UV lamp to increase its ability to kill bacteria. So, the quality of drinking water is absolutely guaranteed.
အိမ်ရဲ့ ဘယ်နေရာမှာမဆို ဘက်တီးရီးယားသတ်ပေးတဲ့ အရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ဖို့ UV အလင်းရောင်ကို ဖြတ်ပြီး ရေက စီးဆင်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရေသန့်ရဲ့ အရည်အသွေးကို လုံးဝ အာမခံပါတယ်။
Where to buy VACC5000 5000LPH Purified water filtration system with the cheapest price?
VACC5000 5000LPH ရေသန့်စစ်ထုတ်ကိရိယာကို ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် ဘယ်မှာ ဝယ်လို့ရနိုင်မလဲ
To ownapure water purification line withacapacity of 5000 liters per hour, around more than 300 million dongs is required. This investment is not really small since it covers costs for not onlyawater purification equipment alone but alsoafilling system, bottle system, bottle shell, and label, etc. Therefore, choosingaproduct with good filtration quality and cheap price isacommon interest of many customers.
တစ်နာရီမှာ ၅၀၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ရေစစ်ထုတ်ကိရိယာကို ဝယ်ယူဖို့ ဗီယက်နမ်ငွေ သန်း ၃၀၀ ကျော်နီးပါးသာ လိုအပ်ပါတယ်။ ရေသန့်စင်ပေးသော စက်သာမက လောင်းဖြည့်စနစ်၊ ဘူးစနစ်၊ ဘူးအခွံ၊ လေဘယ် စတာတွေ ပါဝင်တာကြောင့် အရင်းက မသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဈေးနှုန်းချိုသာပြီး အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ စက်ကိုရွေးချယ်နိုင်တာကြောင့် ဝယ်ယူသူတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Viet An is proud to be the best manufacturer, importer and distributor of filling machines, water purification lines, bottle blowing machines and tube ice making machines in Vietnam. We commit to provide our customers with the most competitive prices.
Viet An သည် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင် လောင်းဖြည့်ပေးသောစက်၊ ရေသန့်စင်ပေးသောစက်၊ ဘူးလေမှုတ်ပေးသောစက်၊ ရေခဲစက်တွေကို အကောင်းဆုံး ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီသူ ဖြစ်ရတာ အလွန်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ဝယ်ယူသူတွေကို ယခုထက် ဈေးသက်သက်သာသာ ရောင်းချပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားသွားပါ့မယ်။
For price references, click https://vietan.vn/day-chuyen-loc-nuoc
https://vietan.vn/day-chuyen-loc-nuoc တွင် ပိုမိုသိရှိအောင် ဝင်ရောက်လေ့လာလိုက်ပါ။
If you are interested in this VACC5000 Purified water filtration system, call us now at 0949 414141 or visit us at our branches in Hanoi, Ho Chi Minh city, Da Nang and Buon Ma Thuot. We are confident to satisfy your demands.
VACC5000 ရေသန့်စစ်ထုတ်ကိရိယာကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ ၀၉-၄၉၄၁၄၁၄၁ ကို ဖုန်းခေါ်ဆိုလိုက်ပါ။ Hanoi, Ho Chi Minh city, Da Nang နဲ့ Buon Ma Thuot တို့မှာ ရှိတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရုံးခွဲတွေကိုလည်း လာရောက်လည်ပတ်နိုင်ပါတယ်။
VAQGF450 Automatic 5G bottle washing, filling, capping 3-in-1 machine
လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း: ၂၀ လီတာဆံ့သော ပုလင်းပေါင်း ၄၅၀ ကို တစ်နာရီအတွင်း ဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Automatic Steam Membrane Shrinking Machine
2 Air disinfection lamp လေပိုးသတ်ထားသောမီးအိမ်7pc VA/ USApec
3 Air disinfection lamp hanger လေပိုးသတ်ထားသောမီးအိမ်ထည့်ထားသည့်ရုံ7pc VA/ USApec
14 40 Filter Cartridge ၄၀ စစ်ထုတ်ကိရိယာတောင့်7pc VA/ USApec
Hỏi đáp & đánh giá VACC 5000 5000LPH ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်